Gantz (2010) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 6.5/10 7093 votes
Ayumi Ito, Go Ayano, Kanata Hongo, Kazunari Ninomiya, Kenichi Matsuyama, Natsuna Watanabe, Shunya Shiraishi, Takayuki Yamada, Tomorowo Taguchi, Yuriko Yoshitaka
Anime ကနေ Live Action ပွနျရိုကျထားတဲ့ Gantz ဆိုတဲ့ imdb 6.5 ရထားတဲ့ ဂပြနျစိတျကူးယဉျ ဇာတျလမျးလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ. Gantz : O ဆိုပီး Animation ဇာတျကားလေးကိုလဲအရငျကတငျပေးဖူးပါတယျ။ အခု Gantz 2010 ဇာတျလမျးမှာတော့ Kei Kurono တဈယောကျ ရထားစောငျ့နရေငျး ရထားလမျးပျေါမှာမူးပီးလဲနတေဲ့ လူတဈယောကျကို သူ့သူငယျခငျြး Masaru Kato ကကယျရငျးရထားတိုကျခါနီးအခွအေနမှောသှားရောကျကူရငျးသူပါ ရထားတိုကျခံရပီး တမလှနျဆနျဆနျနရောတဈခုမှာ ကစားပှဲတှကေစားဖို့ ဖွဈလာတဲ့ အခါမှာတော့ ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈမလဲ ဆိုတာ ကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ ရိုကျခကျြအလနျးတှနေဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျးဇာတျကားတှနှေဈသကျသူတှအေတှကျ ဒီကားကိုလကျမလှတျသငျ့ပါဘူး
Anime ကနေ Live Action ပြန်ရိုက်ထားတဲ့ Gantz ဆိုတဲ့ imdb 6.5 ရထားတဲ့ ဂျပန်စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်. Gantz : O ဆိုပီး Animation ဇာတ်ကားလေးကိုလဲအရင်ကတင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခု Gantz 2010 ဇာတ်လမ်းမှာတော့ Kei Kurono တစ်ယောက် ရထားစောင့်နေရင်း ရထားလမ်းပေါ်မှာမူးပီးလဲနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သူ့သူငယ်ချင်း Masaru Kato ကကယ်ရင်းရထားတိုက်ခါနီးအခြေအနေမှာသွားရောက်ကူရင်းသူပါ ရထားတိုက်ခံရပီး တမလွန်ဆန်ဆန်နေရာတစ်ခုမှာ ကစားပွဲတွေကစားဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ရိုက်ချက်အလန်းတွေနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းဇာတ်ကားတွေနှစ်သက်သူတွေအတွက် ဒီကားကိုလက်မလွတ်သင့်ပါဘူး
Ayumi Ito Go Ayano Kanata Hongo Kazunari Ninomiya Kenichi Matsuyama Natsuna Watanabe Shunya Shiraishi Takayuki Yamada Tomorowo Taguchi Yuriko Yoshitaka
Option 1 storage.msubmovie.com 616 MB SD (480p)
Option2server.mfile.cloud 616 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 616 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 616 MB SD (480p)